Iiholide ezimnandi ezivela kuJanma Gene!
U-2020 ibingunyaka ongaqhelekanga kakhulu, ophethwe yimiceli mngeni emitsha kunye nokungaqiniseki okuphezulu. Ukuziphatha, ukuhlonipha abanye kunye nokusebenzisana bekubaluleke kakhulu kulo nyaka kunakuqala. Ngokuzinikela okungaqhelekanga kwabasebenzi bakaJanma Gene, siyigcinile imisebenzi yethu ingaphazanyiswa kwaye ...Funda ngokugqithisileyo »
Uvavanyo lwe-nucleic acid lugqityiwe kwimizuzu engama-40!
"UJanma gene" unamaqonga amabini obuchwephesha buchonga ubuchwephesha be-asidi (iqonga lokufumanisa iasidi yeasidi, iASEA nucleic acid yokufumana ngokukhawuleza iqonga), Iimveliso eziphuhliswe ngokusekwe kweli qonga zilula, ziyakhawuleza, zichaze kakhulu, Ukuziva okuphezulu kunye nezinye izinto ... Funda ngokugqithisileyo »
Ityhubhu yokulahla isampulu yentsholongwane kaJanMa Gene iyathengiswa!
Uninzi lwezisombululo ezikhoyo zokulondolozwa kwentsholongwane ziqulathe ityuwa ye-guanidine (i-guanidine isothiocyanate okanye i-guanidine hydrochloride), ezizezona ziqhelekileyo iiproteni denaturants zeseli lysis ngexesha lokukhutshwa kwe-acid ye-nucleic, kwaye zinokungazisebenzisi iintsholongwane. Nangona kunjalo, inkqubo yetyuwa ye-guanidine ayinakho ...Funda ngokugqithisileyo »
Isixhobo sePCR esine-fluorescent (ND360) esiphuhliswe ngu "JanMa gene" safumana isatifikethi se-CE!
Kutshanje, isixhobo sePCR (ND360) esibengezelayo esiphuhliswe ngu "JanMa gene" sifumene isatifikethi seEC, esibonisa ukuba inkqubo ye-nucleic acid yokufumanisa uhlobo lweJanMa iye yamkelwa ngamazwe aphuhlileyo eYurophu kwaye ifumene isiqinisekiso sokuthengisa phesheya. Ukusukela ukuphuma ...Funda ngokugqithisileyo »
Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. iimveliso zonyango zokuqala 2020CACLP, iimveliso ezininzi zovavanyo ezikhawulezayo ze-asidi ukubonakala okumangalisayo!
Ukusukela nge-21 ukuya kwi-23 ka-Agasti, i-CACLP, i-17th yeLebhu yeLebhu yeLebhu yaMazwe ngaMazwe kunye neGazi lokuTofela iGazi kunye neReagent Fair, ibibanjwe ngempumelelo eNanchang Greenland International Expo Centre. Amashishini angama-1006 avela kulo lonke ushishino lweshishini lokuxilonga in vitro (IN vi ...Funda ngokugqithisileyo »
Ngo-Epreli 25, 2020, Icandelo loMphathiswa Wezorhwebo, uLawulo Jikelele lwamasiko kunye noLawulo lukaRhulumente lokulawulwa kwezentengiso kunye nolawulo lweRiphabhlikhi yabantu base China lakhupha isibhengezo esinguNombolo 12 sika 2020 sokomeleza ngakumbi ukujongwa kwe e ... Funda ngokugqithisileyo »
Ukufunyanwa kwe-Nucleic acid yenoveli coronavirus yeQingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. iqinisekisiwe yi-CE.
Ukufunyanwa kwe-Nucleic acid yenoveli coronavirus yeQingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. iqinisekisiwe yi-CE. Ngomhla wamashumi amathathu anesithathu ku-Matshi, i-COVID nucleic acid test kit (Rapid PCR fluorescence method) yeQingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd.Funda ngokugqithisileyo »
Ngorhatya lwango-Okthobha i-11, iQingdao Jianma Gene Technology Co, Ltd. (emva koku ebizwa ngokuba yi "Jianma Gene"), inkampani ephethwe ngokupheleleyo yiQingdao nede Biotechnology Co., Ltd. (Ikhowudi yeSitokhwe: 800757) kuluhlu eQingdao blue ocean equity centre trading, rece ... Funda ngokugqithisileyo »
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iikiti zeChina ezikhawulezayo zovavanyo, Ikhithi yasimahla yokuSusa, Ikhithi yokuKhupha iAcid Nucleic ekhawulezayo, I-Canine Parvovirus (Cp),